MADAXWEYNE KU-XIGEENKA SOMALILAND: “Aqoon kasta oo aad leedahay haddii aad Yurub tagto weel uun baad..” | WWW.SOMALILAND.NO
MADAXWEYNE KU-XIGEENKA SOMALILAND: “Aqoon kasta oo aad leedahay haddii aad Yurub tagto weel uun baad..”
Posted on Maarso 3, 2008 by Abdirisak Fadal
Hargeysa. Isniin, 03 March 2008 (sl.no)- Madexwayne-ku-xigeenka Somaliland Md. Axmed Yuusuf Yaasiin, ayaa sheegay in tahriibka da’yartu saamayn xun ku yeelan karo horumarka Somaliland, taas oo haddii aan wax laga qabana cawaaqib xumadeeda la arki doono.
Madaxwene ku xigeenku Md. Axmed Yuusuf Yaasiin, wuxu sidaa ka sheegay xaflad ay shahaado-sharaf ku guddoonsiiyeen urur ay ku bahoobeen ardayda reer Somaliland ee wax ku barta jaamacadaha dalka Itoobiya. Waxaanu sheegay in qofkasta oo wax bartay uu sharaf iyo sumcad ku dhex leeyahay dalkiisa oo uu ka shaqaysto, balse aanay karaamo iyo sharaf lahayn in Yurub loo tahriibo ama la tego.
“Anigu waxaan idin kula dardaarmayaa waar dhoofkan ina wareeriyey innaga daaya, Yurub waa la yaqaanaa, anigu marka aan qiimeeyey dadka tagay waxay ku nool yihiin nolol Cidhiidhi ah, markaa anigu waxaan la yaaban ahay meeshan lagu socdo ma dhaanto ninkaa dawarsanaya ee wax la siinayo. Sadaqo nin shaqaystay oo dhididay, ayaa wixii uu shaqaystay laga jarayaa, halka ay maanta ku socdaan dhallinyaradeenii waa halkaas.” ayuu yiri Madaxwene ku xigeeenku.
Waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Maanta adigoo qaatay shahaado sare ayaad tagtay Yurub, ogow weel ayuun baad xalaysaa oo wixii aad baratay ku shaqayn maysid, halkaa lagaama aaminsana, halka lagaa aaminsan yahay waa dalkaaga hooyo. Waxaan la hadlayaa dhallinyaradda halkan ka taga ee taga Sudan ee ka sii lugeeya siina mara Saxaraha Afrika. Meelahaas waxa la sii maraa waa dhul kala fog inta halkaa ku haligmatayna ma yara.”
Madaxwene ku xigeenka Somaliland waxa uu xusay in Dalku aanu ka maarmin waxtarka iyo Maskaxda da’yarta wax barataa. “Adeer idin kama maarano oo waddanku idin kama maarmo, adduunka waxa la ogaaday in xoogiisu yahay shacabka, kaas oo ah mid is haysta, iminka Shiinuhu wuxuu ku horumaray waa bilyan iyo badh aan meel u dhoofin oo isku duuban oo waddankoodiina aaminay, kuwaas oo maanta la leeyahay 25-ka sanno ee soo socda adduunka wuu dhaafayaa.” ayuu yiri Madaxwene xigeenku.
Madaxwene xigeenku waxa kale oo uu soo hadal qaaday qaddiyadda Somaliland. “Waxa la dajiyey qaabkii aynu uga mid noqon lahayn adduunka oo shaqo way inoo hadhay, shaqadda hadhayna waxa weeyaan, marka ninka Jaadka cunaa uu haleeli waayo ayey shaqo taalaa, laakiin waxaynu wadnaa qaabkii aynu uga midka noqon lahayn caalamka, marka la ina ictiraafo sidii waddankeena aynu dhisi lahayn baa muhiin ah, kuwa dhisaya ee loo sii tababarayaana waa idinka [dhallinyarta], jiilba-jiil ayuu riixayaa ninna raagi maayo, jiil walba wuxuun baa lagu xusuusan doonaa.” ayuu yiri Md. Axmed Yuusuf Yaasiin. Waxaanu shacabka ugu baaqay inay dalagyada dhulka ka baxa beertaan.
“Maanta adduunka oo dhan waddanka kaliya ee haddii uu dagaal dhaco bilaa cuntadda noqonayaa waa Somaliland, innaga cuntadeenu wuxuu ahaa hadhuudh, waxay ahayd in hadhuudhkaa sii horumarino oo nooc kasta ka samaysano. Maanta waxa ina dilay waa Bariiska Thailand laga soo waarido.” ayuu yiri Madaxweyne-ku-xigeenka Somaliland Md. Axmed Yuusuf Yaasiin.
Guddoomiyaha ururka ardayda reer Somaliland ee wax ka barata jaamacadaha dalka Itoobiya Mr. Bashiir Diiriye Ibraahim oo isna halkaa ka hadlay ayaa sheegay in Madaxweyne-ku-xigeenku ku mutaystay shahaado-sharafkan waxqabadka iyo shaqada fiican ee uu u hayo qaranka Somaliland.
« SOOMAALIDU IYAGAA SACABKA U TUMAYA, HORKACAYANA JABKA & DHIBKA LALA MAAGAN YAHAY Barack Obama oo saxaafadii u soo dhigatay »